Taliye ku xigeenkii Saldhigga Mijir ee magaalada Bossaso oo goor dhawayd la dilay. – Radio Daljir
Taliye ku xigeenkii Saldhigga Mijir ee magaalada Bossaso oo goor dhawayd la dilay.
Bossaso, Aug, 06 – Allaha u naxariistee waxaa caawa magaalada Bossaso lagu dilay taliye ku xigeenkii saldhiga Mijir ee magaalada Bossaso oo la oran jiray Axmed Hargaysa, waxaana dilkaasi geystay rag madaxa soo duubtay oo aan haybtooda la aqoon sida ay Daljir u sheegeen dad ka agdhawaa goobta shilku ka dhacay.
Ciidamada Booliska ee gobolka ayaa goobta isku gadaamay wax yar ka dib markii uu dilku dhacay mana jirto cid ilaa iyo hadda loo qabtay dilkaasi sida ay Radio Daljir u sheegeen saraakiisha ammaanka ee gobolka Bari.
Magaalada Bossaso ayaa muddooyinkii dambe ka nasatay dilalka qorshaysan, oo mar sii horraysay joogto ka noqday. Waxaana arintani imaanaysa iyadoo uu dhawaan xilka la wareegay guddoomiyaha cusub ee Bari C/samed Max?ed Gallan oo sheegay in tallaabada ugu horarysa ee uu qaadayo ay noqonayso dhinaca ammaanka.